के ईश्वर तपाईंको वास्ता गर्नुहुन्छ? (भजन ४०:१७)
के ईश्वर तपाईंको वास्ता गर्नुहुन्छ?
ईश्वर तपाईंलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ
ईश्वर तपाईंसित नजिकिन चाहनुहुन्छ
बाइबलले जीवनलाई नयाँ मोड दिन्छ
अन्याय र अपराध विरुद्ध म आफ्नै युद्ध लड्दै थिएँ
“मैले देखेको सपना सुन्नुहोस्”
हाम्रा पाठकहरू सोध्छन्
के परमेश्वर कुनै भावना नभएको शक्ति हुनुहुन्छ?
“म त गरिब र दरिद्र छु। परमप्रभुले मेरो विचार गरून्‌।” *—इस्राएल राष्ट्रका दाऊद, येशू जन्मनुभन्दा झन्डै १,१०० वर्षअघि।
“जाति-जाति त बाल्टीको एक थोपो पानीजस्तै छन्‌।”—यशैया ४०:१५, NRV
दाऊद आफूलाई ईश्वरले वास्ता गरून्‌ भन्ने चाहन्थे। के तिनको चाहना उचित थियो? के ईश्वर तपाईंको वास्ता गर्नुहुन्छ? सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरले मानिसको वास्ता गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न थुप्रैलाई गाह्रो लाग्छ। किन?
एउटा कारण, ईश्वर मानिसहरूभन्दा कता हो कता उच्च हुनुहुन्छ। उहाँको नजरमा मानिसहरू “बाल्टीको एक थोपो पानीजस्तै छन्‌। तिनीहरू तराजूमा टाँसिएका धूलोजस्तै छन्‌।” (यशैया ४०:१५) ईश्वरमा विश्वास नगर्ने एक जना लेखकले यस्तो समेत लेखे: “ईश्वरले म अनि मेरो कार्यमा व्यक्तिगत चासो राख्नुहुन्छ, उहाँले मलाई जुनसुकै अवस्थामा तुरुन्तै मदत गर्नुहुन्छ भनी कसैले भन्छ भने त्यो उसको घमन्ड हो।”
अर्कोतर्फ, कोही-कोही भने आफ्ना गल्तीहरूको कारण आफूलाई ईश्वरको निगाह पाउन अयोग्य सम्झन्छन्‌। उदाहरणको लागि, जिम नाम गरेका एक अधबैंसे व्यक्ति यसो भन्छन्‌: “शान्त रहन र आफैलाई वशमा राख्न सकूँ भनेर मैले धेरै प्रार्थना गरें। तर जति गरे नि मेरो रिसाउने बानी जाँदै गएन। त्यसैले म त साह्रै नराम्रो मान्छे रहेछु, ईश्वरले पनि मलाई केही मदत गर्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्यो।”
के ईश्वर मानिसजातिबाट असाध्यै टाढा हुनुहुन्छ? उहाँ हाम्रो वास्तै गर्नुहुन्न? त्रुटिपूर्ण मानिसहरूलाई उहाँ कुन दृष्टिले हेर्नुहुन्छ? ईश्वरले नै आफ्नो विषयमा बताउनु नभएसम्म कुनै मानिसले यी प्रश्नहरूको सही जवाफ दिन सक्दैन। तर ईश्वरले मानिसजातिलाई दिनुभएको किताब बाइबलले हामीलाई यो कुरामा विश्वस्त बनाएको छ: उहाँ मानिसहरूमा चासो नराख्ने टाढाको व्यक्ति हुनुहुन्न। “भनौं भने, उहाँ हामीमध्ये कसैबाट पनि टाढा हुनुहुन्न” भनी बाइबल बताउँछ। (प्रेषित १७:२७) यसपछिका चार वटा लेखहरूमा आफूले मानिसहरूमा राख्ने चासोबारे ईश्वरले के भन्नुभएको छ र हामीजस्तै मानिसहरूलाई उहाँले कसरी चासो देखाउनुभएको छ भनेर विचार गर्नेछौं।
^ अनु.3भजन ४०:१७, NRV.